N'ogbe Single-Adịrị mezuwo IA ịkpakọba Aluminium Platform Ladder Nzọụkwụ stool Nsukka na Suppliers | ABC
Mgbe ikwesiri iwepụ ákwà mgbochi ahụ ma dị ọcha, ị ga-achọ ya;
Mgbe ikwesiri iwere ihe ndị dị na kọbọd mgbidi kichin, ị ga-achọ ya;
Mgbe ịchọrọ inweta folda na kọfịịịfịfịs, ị ga-achọ ya;
Mgbe ịchọrọ ịkpụcha osisi toro ogologo n'ogige ahụ, ị ​​ga-achọ ya;
Mgbe ị na-ehicha, ọ dịkwa gị mkpa. . .
Chei ~ need chọrọ ya n'oge ọ bụla, ebe ọ bụla. Ọ ghọọla ngwaahịa dị mkpa maka ndụ ụlọ.
O nwere ọtụtụ ihe dị mma, ka m gosi gị,
1. Ihe onwunwe bụ aluminom, nke na-eme ka ubube dị oke ọkụ. Ubube e ji osisi rụọ nke ọdịnala buru oke ibu ma sie ike ebu.
2. Ọ dị mfe imeghe na imechi.
3. Otu bolt imewe, mee ka ọdịdị dị ọcha & mụrụmụrụ.
4. Ubube a dị oke mma, ihe mgbochi mgbochi na-agbakwunye ntọala abụọ iji zere mmerụ ahụ.
5. Ibu ibu bụ 540 n'arọ. Kedu okpukpu abụọ karịa ọkwa ladulu na ahịa.
6. Ubube ahụ zutere ọkọlọtọ US ANSI. Nke dị ezigbo mma.
7. Anti-ileghara imewe, mfe jidere ya.
8. Ọ bụ ubube apịaji, yabụ na ewereghị ohere ịchekwa ya.
9. Ubube a nwere ọdịdị dị elu ma na-enye ndị mmadụ ezigbo ntụsara ahụ.
Kedu onye na-agaghị achọ ka ubube nwere ọtụtụ uru? Kedu ihe ị na-eche? You kwesịrị ịzụta otu.
Wantchọrọ inweta ozi ndị ọzọ dịka ọnụahịa ngwaahịa, ọnụọgụ ngwaahịa, na ụbọchị nnyefe? Zitere anyị ozi ozugbo, anyị ga-akpọtụrụ gị n'ime awa 24, ma ọ bụ pịa njikọ a iji kpọtụrụ anyị ozugbo: https: //www.abctoolsmfg.com/contact-us/
Nke gara aga: 2 na 1 vergbọ ala Aluminom na-agbanwe agbanwe / Aka Nchekwa Aka HT7A
Osote: Aluminium Industrial telescopic site nzọụkwụ kwụ ọtọ ịkọwapụta ọkwa steepụ mpịachi steepụ
Kpakọba Aluminium Ubube
Ọkwa 1A n'ọkwá
Ladzọ Na-alụ Nanị Otu
Shelf maka ulo Ngalaba Na-ahụ Maka Azụmaahịa Ogbe shelf Obere Nchekwa Obere Ime ụlọ ime ụlọ Mpempe akwụkwọ nchekwa edo edo